UTau ubuyela kwi-Uefa Champions League, uma limthola elaseBelgium
Umgadli weBafana Bafana, uPercy “Lion of Judah” Tau angase aphinde abonakala emncintiswaneni omkhulukazi emhlabeni kunobhutshuzwayo i-Uefa Champions League. Lokhu kulandela ukuvela kwezindaba zokuthi lesi sibabuli somdlali siphezulu ohlwini lwabadlali abafunwa eqenjini lase-Belgium i-Antwerp.
Leli wembu lisezinhlelweni zokuqinisa isikwati salo njengoba lizodlala kulo mqhudelwano ngesizini ezayo. I-Antwerp iqede endaweni yesibili kwiBelgian First Division A ngesizini edlule.
Lokho kuyibekisele indawo emidlalweni yokuhlungela iChampions League ngesizini ezayo. Leli qembu eliqeqeshwa uBrian Priske kuvela ukuthi selibeke etafuleni u-€5m (R84m) ukuze lithole lo mgadli okumanje usemabhukwini eBrighton and Hove Albion egijima kwiEnglish Premier League.
Umqeqeshi weBrighton, uGraham Potter egcina ukuvela kwabezindaba ngekusasa likaTau wakubeka kwacaca ukuthi lo mdlali usasezinhlelweni zeqembu lakhe.
Nokho bekunokukhala okukhulu ngokungamdlalisi kwakhe kuleli qembu ngesizini edlule. Kodwa uPotter wathi basabheke lukhulu kuTau futhi bakholwa ukuthi usadinga ukunikwa isikhathi esanele ukuze ajwayee le ndawo abafuna ayidlale.
Utau ubanga indawo nezinkunzi esezizakhele igama kuleli qembu lase-England. Kulindeleke ukuthi i-Brighton ihlale phansi iphinde ibambe izingxoxo ngekusasa likaTau.
Uma konke kuhambe njengezifiso zabalandeli be-Antwerp ukuthi uTau agijime kuleli qembu, uzobe engemusha ebholeni laseBelgium. Ngemuva kokumlanda kwiMamelodi Sundowns, iBrighton yabe seyimbolekisa kwi-Union SG nokulapho afike izinto zamhambela kahle.
Wadlala imidlalo engu-23 wabeka enethini amabhola ayisithupha waphinde wakhala wemuka nomklomelo woMdlali oVelele ngaleyo sizini waphinde wasiza leli qembu lakhuphukela kwiligi enkulu.
Kodwa-ke iBrighton yaphinde yambolekisa kwiClub Brugge nokulapho adlala khona imidlalo engu-18 washaya amagoli amathathu. Wadonsa amehlo omhlaba ngesikhathi iBrugge ibhaxabula iReal Madrid emdlalweni we-Uefa Champions League.
FUNDA NALA: IChiefs ayichithanga sikhathi yaqala ukufaka inkanyezi ejezini layo lesizini ezayo
IBrighton igcine isimdlulisela kwi-Anderlecht ngaphambi kokuthi imlande imbuyisele e-England nokulapho izinto ziqale zangamhambela kahle njengoba bekubonakala isikhathi esiningi ekhuhla ibhentshi.
Lokhu kwephule izinhliziyo zabalandeli bebhola eNingizimu Afrika. Bebekhala ngokuthi ukhuhliswa kanjani ibhentshi ekubeni abonakala amagalelo akhe futhi aziwa umhlaba wonke.
Previous Previous post: UZuma uthi isibhaxu esatholwa yiChiefs kwiWydad sayivula amehlo
Next Next post: ULetsoalo ubukise ngeLesotho edlala okokuqala kwiBafana